कुमार पौडेललाई गोली हान्ने इन्सपेक्टर साह र निर्देशन दिने प्रहरीको जाने भो जागिर ! — onlinedabali.com
कुमार पौडेललाई गोली हान्ने इन्सपेक्टर साह र निर्देशन दिने प्रहरीको जाने भो जागिर !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेललाई गोली हान्ने र निर्देशन दिने प्रहरी अधिकृतलाई कारवाही हुने भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गोली हान्ने इन्सपेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साहसहित तीन जनालाई निलम्बन गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका तत्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दीमा गरिएको उक्तकाण्डमा संलग्न इन्सपेक्टर शाहसहित हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगल सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आयोगले मुचुल्का उठाउदा गल्ती गरेको भन्दै इन्सपेक्टर किरण न्यौपाने र सई सूर्य कुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले गोली हान्न आदेश दिने अधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पौडेललाई गोली हान्ने इन्सपेक्टर साहसहित तीन प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा. वीरेन्द्र कुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जनाएका छन् ।
आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदी सरकारले व्यवस्थाअनुसार सिफारिस कार्यान्वगन गरेमा गोली हान्ने र आदेश दिने प्रहरीको जागिर जाने भएको छ । त्यसैगरी पोष्टमार्टममा गल्ती गर्ने चिकित्सक र मुचुल्का उठाउने प्रहरीलाई समेत कारवाही हुने भएको छ ।